Cayaartoydii lakala qaatay bishii Janaayo kii ugu xumaa ayuu Noqdey.. %
Cayaartoydii lakala qaatay bishii Janaayo kii ugu xumaa ayuu Noqdey..
EnglandFalanqeyntaSuuqa Kala iibsiga
Weeraryahanka kooxda kubada cagta ee Manchester United Alexis Sanchez ayaa loo aqoonsaday in uu yahay kii ugu xumaa dhamaan Cayaartoydii lakala qaatay bishii Janaayo ee Sanadkaan Horyaalka dalka England.
Xiddiga Alexis Sanchez oo Manchester United kaga soo biirey Arsenal kadib markii uu galay heshiis kala badalasho Cayaartoy ayaa u muuqda mid la qabsan waayey kooxdiisa Cusub waxaana loo aqoonsaday Faloobka Cayaartoydii lakala qaatay bishii Janaayo ee aan soo dhaafnay.
Xiddiga dalka Chile oo sidoo kale ahaa heshiiskii ugu weynaa ee dhacay bishii Janaayo isla markaana Manchester United kula heshiiyey in uu Todobaadkii ugu shaqeeyo £350,000 ayaa 10 kulan oo uu Saftay wax Saameyn ah aan ku yeelan garoonka Man United waxaana uu dhexda kaga jiraa dhaleeceyn aad u weyn oo kaga imaaneysa Cayaartoydii hore iyo Jamaahiirta Naadigiisa cusunb.
Cayaartoyda lagu Faa iidey ee lakala qaatay bishii Janaayo waxaa ka mid ah Virgil van Dijk kaas oo Liverpool ku iibsatay £75m waxaana daafacaan 10 kulan oo uu u saftay kooxdiisa cusub ladareemay Saameyn weyn oo uu ku soo kordhiyey si wanaagsan ayuuna ula qabsaday.
Waxaa kaloo aad loo amaanay Cayaaryahanka ku biirey Everton ee ka tegay Arsenal Theo Walcott kaas oo Goolal badan u dhaliyey kooxdiisa cusub wax weyna ku kordhiyey.
Sidoo kale Waxaa jira Cayaartoy Nasiib daro lakulmay oo dhaawacyo hareeyeen wixii ay Noqon lahaayeenba kuwaas oo ay ka midyihiin Ross Barkley Chelsea Daniel Sturridge West Brom Patrice Evra West Ham.
David Luiz oo laga waayay safka kooxda Chelsea,waxaana lagab yaabaa inuu…
Horseed Vs Elman- Wax Waliba Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Kullanka